ပရုပ်လုံးနံ့ မွှေးနေတဲ့ အဝတ်အထည်တွေရဲ့ ကြောက်စရာ အန္တရာယ် – WunYan
ပရုပ်လုံးနံ့ မွှေးနေတဲ့ အဝတ်အထည်တွေရဲ့ ကြောက်စရာ အန္တရာယ်
အဝတ်အထည် လေးတွေ ပရုပ်လုံးနံ လေး သင်းနေအောင်၊ သန့်ရှင်းတဲ့ ရနံ့လေး၊ ပိုးမွှား တွေတက်မှာလဲမပူရအောင်ဆိုပြီး ပရုပ်လုံးတွေကို ရှိသမျှ အဝတ်ဗီရို၊မွေ့ယာ၊စောင်တွေသိမ်းတဲ့နေရာ၊သားသား မီးမီး တို့ရဲ့ အဝတ် ခြင်းတောင်း တွေထဲမှာ ထည့်ကြတာ ဆန်းတာလုပ်လို့ ပြောစရာရှိတယ်။ ဘာများ မှားပြန်ပြီလဲပေါ့။
အင်္ဂလိပ် လို Moth Balls လို့ခေါ်ပြီး မြန်မာပြည် မှာ ပရုပ်လုးံ လို့သိကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ပိုးမွှား ပြေးအောင် သုးံတာပေါ့လေ။ ပါဝင်တဲ့ ဓာတုပေဒ ဓာတ်က Naphthalene နဲ့ Paradichlorobenzene. (နပ်ဖ်သလင်း နဲ့ပါရာဒိုင်ကလိုရိုဘန်ဇင်း) ဖြစ်ပါတယ်။
ပရုပ်လုးံ ရဲ့ အာနိသင်ကိုက တဖြေးဖြေးလုးံပါးပါးပြီး အငွေ့ ပျံတာလေ။ ပျံတဲ့ အငွေ့ တွေက အပေါ်က ပြောတဲ့ ဓာတုဓာတ်တွေပေါ့။ စူးစူးရှရှနဲ့ သင်းပျံတဲ ရနံ့ လို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ အငွေ့တွေက သားသား မီးမီး တို့အပြင် လူကြီးတွေရော ၊ကလေးငယ်၊ဖိုးဖိုးဖွားဖွား အားလုးံရဲ့ ကျန်းမာရေး ကို ထိခိုက်စေတဲ့ အဆိပ်ငွေ့ သဘောပါပဲ။ ဖြေးဖြေးချင်း သူလဲလုးံပါးပါးရင်း ကိုယ်ကိုလဲထိခိုက်နေတာပေါ့။
G6PD ဆိုတဲ့ အင်ဇိုင်း ချို့တဲ့မှုရှိသူတွေဆို ပိုပြီးတောင်ထိခိုက်တယ် ။ လူကြီးနဲ့ ကလေး ခံရတာချင်း ဘာကွာမလဲ မေးစရာရှိတယ်။ ကလေး တွေရဲ့ ဒီ အဆိပ်ဓာတ်တွေကို ကိုယ်ကနေထုတ်ပြစ်နိုင်တဲ့ အားအင်က လူကြီးထက်စာရင်နဲသေးတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ပို အန္တရာယ် ရှိတာပေါ့၊လူကြီးတွေအတွက်လဲ မကောင်းပါဘူး။
ခုခေတ်မှာ ပရုပ်လုးံ ဖြူဖြူလေးတွေတင်မကတော့ဘူး၊ အရောင်စုံ ဒီဇိုင်းစုံ နဲ့ဆိုတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံ မျိုးစုံဈေးကွက်ထဲမှာပေါ်နေပါတယ်။ ဗီရိုထောင့်၊ခြင်းထောင်းထောင့် မှာ တွေရင် ၊ကြမ်းပေါ်လိမ့်ကျနေတာ တွေ့ရင် သားပိစိ ၊သမီးပိစိလေးတွေက ထုးံစံအတိုင်းပါးစပ်ထဲ ကောက်ထည့်လိုက်မှာပဲ၊ ဒါဆို ပိုဆိုး။ဒါကြောင့်သေချာသိမ်းရတယ်။
ဟုတ်ပြီ အငွေ့ က ရှူ မိလို့ရေရှည်မကောင်းဘူးဆိုရင် ပရုပ်လုးံနဲ့ အကြာကြီးထိတွေ့ထားတဲ့ အဝတ်ကိုဝတ်ရင်ရောလို့မေးစရာရှိတယ်နော်။ အရေပြားက နေထိတွေ့တာလဲ မကောင်းပါဘူး။ ဓာတ်တွေက အဝတ် တွေထဲမှာစိမ့်ဝင်ပြီး ရှိနေပါတယ်။ ပြန်လျှော်ပြီး နေလှန်းခြောက်သွားမှ ဝတ်ပေးတာ ကောင်းပါတယ်။
ပရုပျလုံးနံ့ မှေးနတေဲ့ အဝတျအထညျတှရေဲ့ ကွောကျစရာ အန်တရာယျ
အဝတျအထညျ လေးတှေ ပရုပျလုံးနံ လေး သငျးနအေောငျ၊ သနျ့ရှငျးတဲ့ ရနံ့လေး၊ ပိုးမှား တှတေကျမှာလဲမပူရအောငျဆိုပွီး ပရုပျလုံးတှကေို ရှိသမြှ အဝတျဗီရို၊မှယေ့ာ၊စောငျတှသေိမျးတဲ့နရော၊သားသား မီးမီး တို့ရဲ့ အဝတျ ခွငျးတောငျး တှထေဲမှာ ထညျ့ကွတာ ဆနျးတာလုပျလို့ ပွောစရာရှိတယျ။ ဘာမြား မှားပွနျပွီလဲပေါ့။
အင်ျဂလိပျ လို Moth Balls လို့ချေါပွီး မွနျမာပွညျ မှာ ပရုပျလုးံ လို့သိကွပါတယျ။ ဆိုလိုတာက ပိုးမှား ပွေးအောငျ သုးံတာပေါ့လေ။ ပါဝငျတဲ့ ဓာတုပဒေ ဓာတျက Naphthalene နဲ့ Paradichlorobenzene. (နပျဖျသလငျး နဲ့ပါရာဒိုငျကလိုရိုဘနျဇငျး) ဖွဈပါတယျ။
ပရုပျလုးံ ရဲ့ အာနိသငျကိုက တဖွေးဖွေးလုးံပါးပါးပွီး အငှေ့ ပြံတာလေ။ ပြံတဲ့ အငှေ့ တှကေ အပျေါက ပွောတဲ့ ဓာတုဓာတျတှပေေါ့။ စူးစူးရှရှနဲ့ သငျးပြံတဲ ရနံ့ လို့ သတျမှတျထားကွတဲ့ အငှတှေ့ကေ သားသား မီးမီး တို့အပွငျ လူကွီးတှရေော ၊ကလေးငယျ၊ဖိုးဖိုးဖှားဖှား အားလုးံရဲ့ ကနျြးမာရေး ကို ထိခိုကျစတေဲ့ အဆိပျငှေ့ သဘောပါပဲ။ ဖွေးဖွေးခငျြး သူလဲလုးံပါးပါးရငျး ကိုယျကိုလဲထိခိုကျနတောပေါ့။
G6PD ဆိုတဲ့ အငျဇိုငျး ခြို့တဲ့မှုရှိသူတှဆေို ပိုပွီးတောငျထိခိုကျတယျ ။ လူကွီးနဲ့ ကလေး ခံရတာခငျြး ဘာကှာမလဲ မေးစရာရှိတယျ။ ကလေး တှရေဲ့ ဒီ အဆိပျဓာတျတှကေို ကိုယျကနထေုတျပွဈနိုငျတဲ့ အားအငျက လူကွီးထကျစာရငျနဲသေးတယျလေ။ ဒါကွောငျ့ ပို အန်တရာယျ ရှိတာပေါ့၊လူကွီးတှအေတှကျလဲ မကောငျးပါဘူး။
ခုခတျေမှာ ပရုပျလုးံ ဖွူဖွူလေးတှတေငျမကတော့ဘူး၊ အရောငျစုံ ဒီဇိုငျးစုံ နဲ့ဆိုတော့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ပုံ မြိုးစုံဈေးကှကျထဲမှာပျေါနပေါတယျ။ ဗီရိုထောငျ့၊ခွငျးထောငျးထောငျ့ မှာ တှရေငျ ၊ကွမျးပျေါလိမျ့ကနြတော တှရေ့ငျ သားပိစိ ၊သမီးပိစိလေးတှကေ ထုးံစံအတိုငျးပါးစပျထဲ ကောကျထညျ့လိုကျမှာပဲ၊ ဒါဆို ပိုဆိုး။ဒါကွောငျ့သခြောသိမျးရတယျ။
ဟုတျပွီ အငှေ့ က ရှူ မိလို့ရရှေညျမကောငျးဘူးဆိုရငျ ပရုပျလုးံနဲ့ အကွာကွီးထိတှထေ့ားတဲ့ အဝတျကိုဝတျရငျရောလို့မေးစရာရှိတယျနျော။ အရပွေားက နထေိတှတေ့ာလဲ မကောငျးပါဘူး။ ဓာတျတှကေ အဝတျ တှထေဲမှာစိမျ့ဝငျပွီး ရှိနပေါတယျ။ ပွနျလြှျောပွီး နလှေနျးခွောကျသှားမှ ဝတျပေးတာ ကောငျးပါတယျ။